लगभग सबै क्यासिनोले जम्मा बोनस प्रदान गर्दछ। यसैले, बोनसको सर्तहरू र विशिष्ट सुविधाहरू बुझ्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। निक्षेप बोनस एक क्रेडिटको रूपमा दिइन्छ जुन तपाईंलाई नियमित रूपमा खेल्न सक्षम गर्दछ। यदि तपाईं सबै बोनस सर्तहरू पूरा गर्न सक्नुहुनेछ, क्रेडिट ब्यालेन्स पैसामा बदलिन्छ जुन तपाईं फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ। स्लट हे नगद
बोनस रकम जम्मा रकमको प्रतिशत वृद्धिको रूपमा सेट गरिएको छ। प्रायः तिनीहरू प्रस्ताव गर्छन् निक्षेप रकमको १००%, तर तपाईं अफरहरू (२००%, %००%…) वा कम (%०%) पनि फेला पार्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं १००% को बोनसको साथ १०० डलर जम्मा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको खातामा on २०० हुनेछ। यदि तपाईंसँग %००% छ भने, त्यसोभए यसले €०० को पूरै कमाउँछ। भेगासको स्लट
अधिकतम बोनस रकम सामान्यतया सीमित छ, र यदि तपाइँ ठूलो रकम जमा गर्नुहुने पनि ठूलो बोनस पाउन सक्नुहुन्न। तर यदि तपाईं कम से कम जम्मा रकम भन्दा कम जमाउनुहुन्छ भने, तपाईं कुनै बोनस प्राप्त गर्नुहुन्न। सामान्यतया, न्यूनतम जमा रकम राशि 10 €।
बोनस प्रकारहरू जम्मा गर्नुहोस्
स्वागत बोनस - पहिलो जम्मा गरेको पछि तपाईले एक बोनस हो। जब तपाईंले जम्मा रकम दिनुहुन्छ, यो अधिकतम अधिकतम बोनस हो।
दोस्रो, तेस्रो र चौथो जम्मा बोनस - सामान्यतः बोनस जम्मा राशि देखि 50-100% को मात्रा हो।
नियमित बोनस - क्यासिनो द्वारा स्थापित गरिएको एक निश्चित दिनलाई दिइएको छ (उदाहरणका लागि, बुधबार वा सप्ताहांतमा)। बोनस जम्मा राशि देखि 25% कुल, तर कहिलेकाहीँ यो परिवर्तन गर्न सक्दछ। त्यसकारण, तपाईंको क्यासिनोद्वारा प्रस्तावित पदोन्नति गतिविधिहरू ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुहोस्, र जम्मा गर्न लाभदायक दिन रोज्नुहोस्।
तपाईं आफ्नो बोनस तुरुन्तै हटाउन सक्नुहुन्न किनकि तपाईंले पहिलेको क्यासिनो (रोलओवर आवश्यकताहरू) मा प्रयोग गर्नुपर्दछ। बोनस रोलओवरले तपाईंको शर्त रकमको सुरुवात बोनस रकम n-fold पटक भन्दा बढी हुनुपर्दछ। उदाहरणका लागि, यदि तपाइँसँग लिङ्क आवश्यकता X100 सँग 30 यूरोको बोनस हो, तपाईले € 3000 लाई चार्ज गर्नु पर्छ। यदि तपाइँ स्लॉट खेल्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई 300 पटक स्पिन गर्न आवश्यक छ (तपाईलाई जित्न वा हराउनु पर्दैन)। धेरै जुआहरू यो आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन् र आफ्नो बोनस पुरा गर्न सक्दछन्। त्यहाँ2विकल्पहरू छन्:
रोलओभर आवश्यकताहरूमा केवल बोनस रकम समावेश हुन्छ। पहिले, तपाइँ जम्मा राशि संग जुवा गर्न थाल्नुहुन्छ र मात्र तपाई बोनसको साथ जुवा खेल्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँ जम्मा राशि संग जुवा खेल्नुहुन्छ भने तपाइँ तपाइँको पैसा हराउनुहुन्न, तर, यसको विपरित, यसको रकम बढाउनुहोस्, तपाइँले बोनस अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ र पैसा लिन सक्नुहुन्छ। बोनस तपाईंको दोस्रो मौकाको रूपमा काम गर्दछ।
रोलओभर आवश्यकताहरूमा जम्मा राशिसँगै बोनस रकम समावेश हुन्छ। तपाईंले यसलाई एक पटक जम्मा गर्दा ठूलो बोनसको रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। एक नियमको रूपमा, यस बोनसको आवश्यकताहरू रोलओभर आवश्यकता भन्दा आधा जति हुन्छ। यस तथ्यको बावजुद, यो बोनस कम लाभदायक छ। बोनसका साथ जुवा खेल्दा तपाईले सीमितताहरू पाउनुभयो (अधिकतम शर्त रकम आवश्यकताहरू, अनुमति प्राप्त खेलहरूको सूची आदि)। र यदि तपाईं जम्मा राशिसँग खेल्नुभयो भने, तपाईंले अझै रोलओभर आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। अन्यथा, यदि तपाईंले बोनस रद्द गर्नुभयो भने, तपाईं आफ्ना सबै जीतहरू गुमाउनु हुनेछ, र क्यासिनोले तपाईंलाई प्रारम्भिक जम्मा राशि मात्र फिर्ता गर्नेछ। ग्रह7क्यासिनो
त्यसैले, तपाईंले बोनस लिनु अघि सबै सीमाहरू जान्न पाउनुहुनेछ। हुनसक्छ, केही अवस्थामा, यो केवल जम्मा रकम जम्मा गर्न को लागी राम्रो हुनेछ? तपाईंको निर्णय गर्न सहयोग गर्नको लागि, हामी प्रत्येक बोनसको लाभप्रद उल्लेख गरौं।
रोल्लोवर आवश्यकताहरु को अतिरिक्त जुआ को अन्य नियमहरुमा ध्यान दिनुपर्दछ:
परिवर्तनीय क्रेडिटको अधिकतम रकम - यदि तपाइँ सबै बोनस अवस्थाहरू पूरा गर्न व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भने, बोनस वास्तविक पैसामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। बोनस सर्तहरूमा अधिकतम रकम समावेश गर्न सकिन्छ जुन पैसामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् कि यो रकम 5-गुणा जम्मा रकमको बराबर हो। यदि तपाईंले स्लॉट मिसिनहरू € 3000 को € बोनसको बोनस प्रयोग गरेर सबै रोलओवर शर्तहरू भेट्नुभयो भने, तपाईंको बोनस winnings कुल € 100 हुनेछ।
समय सीमा - प्रत्येक बोनसको लागि क्यासिनो समय सीमा सेट गर्दछ, जब यो प्रयोग हुन सक्छ। सामान्यतया, यो अवधि एक महिनाको लागि रहन्छ, र त्यस पछि बोनस रद्द गरिएको छ।
अधिकतम शर्त राशि सीमा - एक क्यासिनो अधिकतम शर्त रकम सीमित गर्दछ। तिनीहरूले यो बोनसका लागि शिकार कम गर्नका लागि गर्छन्। उच्च फैलावट दर संग आक्रामक खेल बोनस शिकारीहरु को लागि एक राम्रो मौका हो, किनकि सरल समाधान एक निश्चित संख्या को लागी सम्पूर्ण बोनस राशि शर्त छ रूले गोलो। र यदि तपाईं जित्नुहुन्छ भने, तपाइँ आफ्नो बोनस 36 पटक सबै बोनस आवश्यकताहरू पूरा गर्न सजिलो बनाउनुहुन्छ। तपाईं आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र कम फैलावट दरको साथ खेल खेल्न सक्नुहुन्छ।
ATTENTION !!! यदि तपाईं बोनससँग खेल्नुहुन्छ भने कैसीनोले शर्त रकम सीमित गर्दैन। यसकारण, कैसीनोले तपाइँको ईनिङहरू बाहिर नगर्नको कारण कारण प्रयोग गर्न सक्छ सावधान रहनुहोस्। यो एक नौसिखिया द्वारा बनाईएको सबैभन्दा साधारण गल्ती हो। तपाईंले सँधै बोनस अवस्थाहरू सावधानीपूर्वक जाँच गर्नुपर्छ।
तर तपाई सजिलै डबलि button बटन प्रयोग गरेर यो अवस्था वरिपरि पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने यस बटनले जितलाई दुई गुणा बढाउनको लागि सक्षम गर्दछ। यो बटन फैलाव दर वृद्धि गर्न सक्षम गर्दछ। केही क्यासिनोहरूले यो विकल्प प्रदान गर्न सक्दछन्, यदि उनीहरूले शर्त राशि सीमित गरे पनि। तर याद गर्नुहोस् कि यो विकल्प स्वचालित रूपमा लागू गरिएको छैन, र तपाईंले यसलाई आफ्नै जाँच गर्नु पर्छ। भेगासको स्लट
खेलहरूमा, रोलओभर आवश्यकताहरू लागू गरिन्छ - क्यासिनोले सम्पूर्ण शर्त रकमको लागि क्रेडिट प्रदान गर्दैन। केही खेलहरूमा यो अवस्था खेलको आधारमा परिवर्तन गर्दछ। आउनुहोस् कि एक उदाहरण विचार गर्नुहोस् जुन विभिन्न प्रकारका गेमहरू समावेश गर्दछ:
खेलको प्रकार शर्तबाट दायाँ प्रतिशत
खेल मिसिनहरु 100%
भिडियो पोकर 20%
उदाहरणको लागि, यदि तपाईं रूले मा रोलोओभर अवस्था भेट्न चाहानुहुन्छ र आवश्यक रकमको लागी € 1000, तपाइँलाई शर्त लगाउन आवश्यक छ: 1000 /0.25 = € 4000। यो मोडेलले बोनस प्रयोग गरेर बोनस शिकारीहरूलाई रोक्छ। ब्लैकज्याकमा पेआउट दर 99.5% मा रकम। औसतमा, तपाइँ कम से कम शर्तहरू गुमाउनुहुनेछ, तर तपाईंलाई बोनस सर्तहरूको अनुसार थप शर्त पर्छ। एक क्यासिनो जुआ चाहिन्छ कि खेलको बारेमा मनपर्छ, तर विशेषज्ञहरू जसले जित्न चाहँदैनन्। कृपया जम्मा गर्नु अघि बोनस सर्तहरूको बारे जान्नुहोस् र पत्ता लगाउनको लागि बोनस प्राप्त गर्नुहोस् यदि तपाईलाई मनपर्ने गेमहरूको सूचीमा मनपर्ने खेल समावेश गरिन्छ।
के यो जम्मा बोनस लिन लायक छ?
मूलतः, हो, यो हो। तिनीहरूले तपाईंलाई खुशी र जुवा विस्तार गर्न अनुमति दिनेछ अब लामो समयसम्म तपाईंको मौका बढ्दै जान्छ। जो बोनसहरू लिन सकिँदैन भन्ने कुरामा समावेश छ जुन एक जम्मा खाता एक बोनससँग सम्बन्धित छ, र बोनस जुन जम्मा रकम देखि 100% भन्दा कम हुन्छ। वेब साइटमा हामीले 3-ग्रेड स्केल (लाभदायक, तटस्थ, र अनुपयुक्त) अनुसार प्रत्येक बोनस रेट गरेका छौं।
जम्मा कैसीनो बोनस अपडेट गरिएको: नोभेम्बर 29, 2019 लेखक: Damon
0.0.1 बोनस प्रकारहरू जम्मा गर्नुहोस्
0.0.2 रोलोभर आवश्यकताहरू
0.0.3 के यो जम्मा बोनस लिन लायक छ?
1.0.0.1 गुलाबीका लागि रेसिङ
1.0.0.2 उपहार पसल
1.0.0.4 बॉबी 7s
1.0.0.5 छिटो छिटो हटाइयो
1.0.0.6 Funky Chicken
1.0.0.8 किंग कोंग रोष
2.0.0.1 ट्रिपल जेब होल्डम पोकर
2.0.0.2 X-men 50 रेखा
2.0.0.3 Supra hot
2.0.0.4 स्पेनिश आँखाहरू
2.0.0.6 लिटिल ब्रिटन
2.0.0.7 गोल्डेन किंवदंती